Semalt Expert: Manatsara ny fahombiazanao amin'ny asanao amin'ny fivoahana ny fitsidihanao manokana avy amin'ny Google Analytics
Rehefa mandinika sy mandinika ny Google Analytics ianao ary mahita fa azo atao ny manilika ny fitsidihanao manokana, dia mandray fanapahan-kevitra tsara ianao. Zava-dehibe ho an'ny tranonkala izay tsy dia lavitra na tsy misy fifamoivoizana satria manome antoka fa ny valim-panadihadiana dia mampiseho ny vokatra tsara ihany ary ny mpitsidika dia tena liana amin'ny famakiana ireo lahatsoratra ao amin'ny tranokala.
Ao amin'ny kaonty Google Analytics, misy safidy maromaro hisafidianana. Azonao atao ny mitadidy ireo torohevitra manaraka naroson'i Oliver King, ny Semalt Manager Success Manager, mba hanaisotra ny fitsidihanao manokana avy amin'ny Google Analytics - elegante maennermode.
Metan'ny serivisy na backend
Io dia iray amin'ireo fomba mahavariana sy mahatalanjona indrindra, saingy ny fampiharana azy dia tsy mora ary maro ny fotoana sy ezaka. Ny fisorohana ny famandrihana ny pejin-kevitry Google Analytics ho anao dia tsy voatery hacked. Tokony hampidirinao ao amin'ny HTM ao amin'ny tranonkalanao io kaody io ary ampifanaraho amin'ny lohatenin'ny server ny mifanaraka amin'izany. Fanaovana safidy izany satria tsy hamela ny fitsidihanao hisoratra amin'ny Google Analytics. Ianao koa dia manana ny fifehezana tanteraka izay tokony ho isaina ny fitsidihana ary tsy tokony. Farany dia hifehy ny fifamoivoizanao manokana ianao ary afaka manatsara ny fahombiazan'ny tranonkalanao amin'ny ankapobeny. Plus, ity fomba fitsaboana ity dia mamela ny fampiasana ny IPs sy ny fitaovana elektronika tsy misy olana..Azo ampiasaina ho an'ny fikambanana madinika sy madinika na madinika.
Ny sivana amin'ny Google Analytics
Ity fomba fampianarana ity dia misy dingana sasantsasany ary mora atao amin'ny fampiasana azy amin'ny alàlan'ny paikady sy ny fahombiazan'ny tranonkala. Tokony hitazona ny adiresy IP, loharanom-panandevozana, teny fikarohana, ary ny lohatenin'ny pejyo ianao mba hahazoana ny vokatra tsara indrindra amin'ity fomba ity. Izy io dia azo antoka, flexibility ary ny fomba amam-panaon'ny Google indrindra indrindra. Izany dia ahafahanao manana fanaraha-maso feno amin'ny fampidiran-tsonia ny tranokala, ary mety amin'ny orinasa na orinasa rehetra. Na ny olona aza dia afaka mametraka adiresy IP ho an'ny besinimaro miaraka amin'ity fomba ity amin'ny fomba tsara kokoa.
Na dia iray amin'ireo fomba fijery tsara sy tsara indrindra aza izy io, dia tokony hieritreritra ny hampiditra cookies ao amin'ny tranonkalanao mba hisorohana olana. Amin'ny alalan'ity fomba fampianarana ity dia tsy maintsy mitazona adiresy IP miavaka ianao mba hahafahan'ny Google Analytics manavaka anao amin'ireo IP tsy azo itokisana. Zava-dehibe ihany koa ny miara-miasa amin'ny karazana browsers rehetra ary mampiasa adiresy IP miavaka fotsiny, anisan'izany ireo takelaka, finday ary fitaovana finday. Amin'izany fotoana izany, aza hadinoina fa tsy lafo be ity fomba ity satria tsy maintsy mametraka ny cookies fanalana ho an'ny tranonkalanao amin'ny fampiasana navigateur samihafa sy fitaovana isan-karazany. Izany dia mety hitarika anao handany vola be raha manakarama olona ianao. Google Analytics dia tsy nizaha ny fahamendrehan'ity fomba ity. Na dia izany aza, maro ny olona no mbola mampiasa izany ary manome azy avo lenta. Azonao atao ny manamaivana ny olana rehetra mifandraika amin'ny Google Analytics miaraka amin'ity fomba ity, ary mora ny mamorona na mamafa ireo sivana ary manitsy ny code HTML. Io fomba fanao io dia mety ho an'ny olona tsirairay sy fikambanana madinika.